COVID Prank Ao Moskoa ambanin'ny tany mpitoraka bilaogin-tsarimihetsika any amin'ny fonja rosiana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » COVID Prank Ao Moskoa ambanin'ny tany mpitoraka bilaogin-tsarimihetsika any amin'ny fonja rosiana
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Fitsangatsanganana an-dalamby • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nilaza ny tompon'andraikitra mpampihatra lalàna fa fanahy iniana "nampihorohoro" ny rafitra fitaterana i Dzhabarov, tamin'ny fotoana nanombohan'ny vaovaon'ny COVID-19 tany Chine sy ny toerana hafa izay nanakoako ny lohatenin-dahatsoratra ary tsy azo tsara ny hamafin'ny aretina sy ny soritr'aretina.
Prankless recankless dia nahatonga ny metro an'i Moskoa naneno ny fanairana.
Karomat Dzhaborov dia hita fa meloka tamin'ny fanaovana asa ratsy.
Voaheloka higadra 28 volana any am-ponja ny bilaogera video.
Nomelohin'ny fitsarana rosiana higadra 2 taona sy 4 volana any am-ponja ilay bilaogera video Tajik maniratsira, taorian'ny fidirana an-tsokosoko Metro ao Moskoa tamin'ny volana faran'ny taona lasa teo, raha mody “voan'ny aretina mahafaty” tamin'ny valanaretina coronavirus izy ary nifanintona tamin'ny gorodon'ny fiara ambanin'ny tany, ka nampandre izany ireo mpandeha namana.
Karomat Dzhaborov dia nomelohin'ny mpitsara iray tao an-drenivohitra rosiana tamin'ny alatsinainy teo noho ny filokana, izay nalain'ny namany sary tamin'io fotoana io raha vao nanomboka nahazo ny tahotra ilay virus. Stanislav Melikhov sy Artur Isachenko, izay niaraka taminy tamin'izany fotoana izany, dia samy nahazo sazy mihantona roa taona.
Tao amin'ny horonantsary, navoaka tao amin'ny fantsona Instagram 'Kara Prank', dia hita ho tafintohina anaty kalesy metro feno i Dzhaborov ary nianjera tamin'ny tany. Rehefa miditra an-tsehatra hanampy azy ny mpandeha miahiahy dia manomboka mikorisa izy ary mamihina ny tendany toy ny hoe manintona. Misy olona iray ao amin'ilay clip avy eo miantsoantso hoe "coronavirus", mandefa mpandeha mikorapaka lavitra azy.
Notazomin'ny polisy ilay mpisoloky azy andro vitsy taty aoriana, ary rehefa hita fa diso ny adiresy nomeny an'ireo mpanao famotorana dia notanana am-ponja izy talohan'ny fotoam-pitsarana. Tany am-piandohana dia nitady ny fotoana famonjana efa-taona ho an'ny teratany Tajik ireo mpampanoa lalàna.
Nilaza ny tompon'andraikitra mpampihatra lalàna fa fanahy iniana “nampihorohoro” ny rafitra fitaterana i Dzhabarov, tamin'ny fotoana nanombohan'ny vaovaon'ny COVID-19 tany Shina sy ny toerana hafa izay tsy dia azon'ny saina loatra. Tamin'izany fotoana izany dia tranga roa monja tamin'io virus io no voarakitra ao Russia, saingy olona 6.21 tapitrisa no efa nanamarina ara-dalàna ny fomba ofisialy.
Ny fahaveloman'ny saka lehibe afrikanina: ny fiainana dia sy ny fizahan-tany ...
Toerana fitsangatsanganana mora vidy indrindra hijerena an'i Louis ...
Tranga COVID-19 voalohany notaterina tao amin'ny Village Olympika Tokyo
Ny fizahan-tany any Oganda dia miarahaba ny fanendrena indray ny fizahantany ...
Manitatra ny fanakatonana ny sisin-tany miaraka amin'i Canada sy ...
Ny fiaramanidina Boeing 737 dia nahatonga ny fiakarana Rano vonjy maika tany Hawaii